Madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya oo sheegay iney kordhinaayaan dagaalada ka dhanka ah Al shabaab |
Madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya oo sheegay iney kordhinaayaan dagaalada ka dhanka ah Al shabaab
Madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto,ayaa isagoo saxaafada kula hadlayay Magaalada Nairobi wuxuu shaaca ka qaaday in marnaba aysan u dul qaadan doonin falalka amaandari ee ka dhaca gudaha dalka Kenya magaalooyin ka tirsan,isagoona cadeeyay in qalab casri ah la geyn doono goobaha inta badan danbiyada ka dhaca.
“Waxaa Naga go’an ilaalinta Nafta iyo hantida Muwaadin kasta oo Kenyan ah,”ayuu yiri William Ruto.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyay in sida haatan wax ay ku socdaan laga badali doono,islamarkaana la qorsheynayo sidii looga hortagi lahaa Weerarada Qaraxyada ah ee ka dhaca gudaha dalka Kenya.
Ku xigeenka Madaxweynaha ayaa hadalkiisa wuxuu taabanayaa weerararkii ugu danbeeyay ee ka dhacay Magaalada Gaarisa oo dad lagu dilay.
Ugu danbeyntii William Ruto ayaa cadeeyay in amaanka uu yahay furaha koowaad ee shacabka reer Kenya,isagoona mar kale ku celiyay inaan loo dul qaadan doonaan dadka inta badan ka danbeeyay falalka amaandari.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa,si gaar ah ciidamada ugula dardaarmay inay ka hortagaan Weerarada Al-shabaab sida uu hadalka u dhigay.